Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol'aanaa raajii qabatee as baye! - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Saayinsii Barnoota Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sad Ol’aanaa raajii qabatee as baye!
Fiigicha Irreecha irratti alaabaa ABO (Oromoo) qabachuu dhoorgan. Ajab jenne. Sun gahaa hin taane. Wanti biraa qophaayes jira adaa; nutu quba hin qabne malee. Amma ammoo mormii ykn hookkara barattoonni mooraa yunivarsiitii keessatti geggeessuu malaniif qajeelfama maatiin barattootaa osoo hin hafin yakkamaa taasisu qabatee as baye Ministerri Saayinsii fi Barnoota Sadarkaa ol’aanaa. Kun dhugatti waan ajaa’ibaati. Sammuu fi ilaalcha barattootaa piroppaagaandaa dhuma hin qabnee fi civics kennaa turan hin geeddarre maatiin akkamitti jijjiiruu dandaá?
Dhiiroo jijjiiiramni akkanaa miti. Jijjiiramni kumaatamni itti wareegames kanaa miti. Saffisaan hin sirraayu taanaan daandii kun kan geessu gara ukkaamsaa fi abbaa irrummaatti. Abbaan fedhe aangoo irra haa jiraatuu abbaan irrummaa waan barbadeessuuf ummanni qabsaaye malee waan ummanni simachuuf qophaayee miti.
Hookkara hiikkaa hin qabne kan fedhu tokko hin jiru. Hookkarri yunivarsiitota keessatti darbaa darbaa mul’atu fokkisaadha. Garuu maatiin osoo hin hafin yakkamaa ykn itti gaafatamaa godhuuf yaaluun madaallii kamiinuu adeemsa sirrii hin taú. Biyya kamittuu waan maatiin ykn barataan mallatteesseef miti kan barnoonni yinivarsiitotatti naamusaa fi tasgabbiin adeemsifamuuf. Kan amma mootummaan godhaa jiru dhibeef dawaa biraa laatuudha. Ukkaamsaa simachuufis ummanni qophii miti. Rakkoo mulátuu fi borus kaúu malu bifa aadaa dimokratawaa gabbisuun irra aanuudha malee tooftaa ukkaamsaa lafti itti dhiite as deebisuun jalqabatti Dr Abiyyiif, itti aansee Oromoof qaaniidha.
Previous articlePaartii bu’uuressuuf mallattoo barbaachisuu gara 4000 ol guddisuun bibixxiilamiinsa hir’isuu mala
Next articleTarkaanfiin Irreecha Finfinnee fi Arsadii irratti fudhatame qaama sabboonummaa, tokkummaa fi duudhaa Oromoo ajjeesuuti